शिव खेराको किताब ‘यु क्यान वीन’ को सारांश  HamroKatha
सफल व्यक्तिमा यी ५ विशेषता हुन्छन्
हाम्रो कथा २०७६ साउन ६ गते १६:४९
एउटा व्यक्ति सुकरातकोमा गाएँ I उनले सुकरातलाई सोधे – सफल व्यक्ति बन्नका लागी के चाहिन्छ ? सुकरातले उनलाई खोला तिर डुल्न लगे । खोला तर्दातर्दै ती व्यक्तिलाई खोलामा डुबाई दिएँ। उनको टाउको समाएर उनलाई खोला भित्र ढकेली रहे। उनलाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो। उनले आफ्नो पुरै प्रयास लगाएर आफूलाई बाहिर निकाले।
उनले झर्केर सुकरातलाई सोधे – मलाई किन यसो गरेको ? सुकरातको जवाफ थियो – जसरी तपाईँलाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो र हावाको खोजीमा आफूले सक्दो प्रयास गरी बाहिर निस्किनु भयो I सफलतालाई पनि श्वास फेर्नु जस्तै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सोच बनाउनु पर्‍यो । यो गरे बल्ल सफल हुन सकिन्छ ।
यस्तै पृष्ठभुमीका साथ ‘यु क्यान वीन’ अर्थात् तिम्रो जीत हुन्छ किताबमा, लेखक शिव खेराले सफल हुन / विजयी हुन कुनै पनि व्यक्तिमा ५ वटा गुण अनिवार्य छ भनेका छन् । यदि यी ५ गुण मध्य कुनै एउटा गुण आफूमा नभए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन I यी गुणहरू विकास गर्न सकिन्छ ।
१) मनोवृत्ति (एटिटुड)
एक पटक हिटलरका सेनालाई गाह्रो पर्‍यो । चारै तर्फबाट दुस्मनलाई उनीहरूलाई घेरे । त्यति बेला सेनाले आत्तिँदै हिटलरलाई आफ्नो समस्या सुनाए । हिटलरले भने – यो त हाम्रो लागी खुसीको कुरा हो । अब हामीले चारै तिर हमला गर्न सकिन्छ । यही हो सफलताका लागी चाहिने सकारात्मक एटिटुड ।
हुन त हिटलरलाई विश्व इतिहासमा राम्रो व्यक्ति भनेर कसैले चिन्दैनन् तर पनि हिटलरमा नेतृत्वकर्ताको खुबी थियो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । उनले सधैँ जीतको परिकल्पना गरेका थिए भनेर पनि नकार्न सकिन्न ।
हावर्ड विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले बताएको छ कि जागिरमा प्रमोसन (सफलता)का लागी ८५ प्रतिशत सकारात्मक एटिटुडले भूमिका खेल्छ र केबल १५ प्रतिशत भूमिका व्यक्तिको क्षमता, ज्ञान, आदि अन्य खुबीहरूले खेल्दछ ।
२) अवसरको खोजी
एक पटक एउटा गाउँमा बाढी आयो । एक जना धार्मिक व्यक्तिले भने आफ्नो परिवारसँग आफ्नो ठाउँबाट भाग्न मानेनन् I उसलाई विश्वास थियो कि भगवानले नै उसको ज्यान बचाउँछन् । आफ्नो डुब्न लागेको घर माथि बसिरह्यो । उसका साथीहरू उसलाई डुङ्गा लिएर लिन आए तर पनि उनी डुङ्गामा जान मानेनन् I उसलाई विश्वास थियो कि भगवानले उनलाई बचाउँछन् I अन्ततः उसको मृत्यु भयो I उसले भगवानलाई सोधे “मैले तिम्रो विश्वास गरे तर तिमीले मलाई बचाएनौँ I” भगवानले भने मैले तिमीलाई परिवारको मध्यमबाट बच्ने अवसर प्रदान गरे, साथीभाइको मध्यमबाट तिमीलाई बच्ने अवसर दिए तर तिमीले यी अवसरहरू पहिचान गर्न सकेनौँ । हो, सफलताका लागी पनि हामीले यस्तै अवसरहरू पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।
सफल हुनु छ भने सफलताका लागी तयार हुनुपर्छ। अनेकौँ हारको अनुभवहरूले नै सफलताको बाटो बनाउने हो । अब्राहम लिंकन २१ वर्षको उमेरमा व्यवसायमा असफल भए । २२ मा चुनाव हारे, २४ वर्षमा फेरी अर्को व्यवसायमा असफल भए, २६ वर्षमा उनको प्रेमिकाको मृत्यु भयो, २७ वर्षको हुँदा उनी मानसिक रूपमा बिरामी भए, ३४/ ४५/ ४७ र ४९ वर्षको उमेर बारम्बार चुनाव हारे र अन्त्यमा ५२ वर्षको उमेरमा अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन पुगे । उनमा हारको डर थिएन र उनी निरन्तर नै सफलताको तयारी गरी रहेका थिए ।
थप, किताबमा भनिएको छ कि सफलताका लागी मुख्य ४ कुरा त्याग्न सक्नुपर्छ :
— आफ्नो डरको सामना गर्न सक्नुपर्छ ।
— उत्प्रेरणाको अभाव I यो अभाव भित्री उत्प्रेरणाको हुन् सक्छ या त बाहिरी उत्प्रेरणाको पनि हुनसक्छ ।
— आत्मसम्मानको कमी। आफूलाई आफ्नू खुबी प्रति विश्वास नहुने अवस्था ।
— आफू भित्र अहंकारको भाव मेटाउन सक्नुपर्छ ।
४) लक्ष्य निर्धारण
एक पटक एक जना डुलुवाले दोबाटोमा एक स्थानीयलाई सोधे – यी दुई बाटोहरू कता पुग्छन् ? स्थानीयले उनलाई सोधे – तपाईँलाई कहाँ पुग्नु छ ? डुलुवाले भने, “म डुल्दै हिँडेको । मलाई थाहा छैन कि मलाई कहाँ पुग्नु छ।” अनि स्थानीयले उत्तर दिए , “उसो भए तपाईँलाई के फरक पर्छ र ! तपाईँ जुन बाटो गए पनि हुन्छ किनकि तपाईँको कुनै गन्तव्य नै छैन । त्यसैले सफलताका लागी आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो लक्ष्य दैनिक दुई पटक पढ्ने बानी बसाल्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागी मनोबल पनि वृद्धि गर्दछ ।
यदि माथि उल्लेख गरिएको ४ वटा गुणहरू हामीले विकास गरी सक्यौँ भने यदि हामीसँग दूरदर्शी भिजन छैन भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। सफलताका लागी ठुलो सपना चाहिन्छ। यदि हामीसँग २/३ महिनाको बबाल कार्य योजना छ तर ३ वर्षमा कहाँ पुग्नु छ ? कस्तो बन्नु छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट नभए मात्र सफलताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। र, त्यही परिकल्पना अनुरूप काम गर्न सकिन्छ । याद राखौँ कि स्टिभ जब्सको टेक्नोलोजीको भिजनले गर्दा नै आज हामी एप्पल कम्प्युटर प्रयोग गर्दैछौँ । त्यसैले सफलताको लागी ठुलो सपना बोक्न सक्नुपर्छ ।